कोरोना संक्रमण ‘नियन्त्रण’ मा आइसकेको भन्दै श्रीलंकाले ‘आंशिक रूप’ मा कर्फ्यु हटाउने – Health Post Nepal
कोरोना संक्रमण ‘नियन्त्रण’ मा आइसकेको भन्दै श्रीलंकाले ‘आंशिक रूप’ मा कर्फ्यु हटाउने
२०७७ वैशाख ८ गते २०:००
कोरोना कहर : चीनमा घट्दै, अरू देशमा फैलिँदै
ललितपुरका वडावडामा बन्दै छ मास्क (भिडियाे रिपाेर्ट)
विश्वभर चौबिस घण्टामा १ लाख ९८ हजारबढी नयाँ संक्रमित, भारतमा मात्रै ५० हजारबढी
‘चितवनमा एसइई दिने सबैलाई स्वास्थ्य जाँच गर्न सम्भव छैन’
श्रीलंकाली सरकारले देशमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप नियन्त्रणमा रहेको घोषणा गर्दै एक महिना लामो कर्फ्यु आंशिक रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ।
श्रीलंकामा मार्च २० देखि २४ घन्टा कर्फ्यु लगाइएको थियो। सोमबारको निर्णयपछि देशको दुईतिहाइ भन्दा बढी भागमा दिनको समयमा कर्फ्यु हटाइएको छ भने राजधानी कोलम्बोलगायत केही जिल्लामा बुधबारसम्म जारी रहनेछ।
अर्को सूचना नआएसम्म हालको कर्फ्यु बेलुका ८ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म जारी रहने जनाइएको छ। देशमा कोरोना भाइरस फैलिनबाट रोक्नका लागि कडा कदम चालेका कारण कर्फ्यु उल्लंघन गर्ने हजारौं मानिस पक्राउ परेका थिए।
सरकारको उक्त निर्णय देशका शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी डा. अनिल जयसिंघेले श्रीलंकामा कोभिड-१९ ‘नियन्त्रणमा’ आइसकेको घोषणा गरेलगत्तै आएको हो। कर्फ्यु खुकुलो भए पनि विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्था बन्द रहनेछन्। सिनेमा हलहरू बन्द रहेका छन, र तीर्थयात्रा र घुमफिर, मेला, जुलुस र सभा बैठकहरू प्रतिबन्धित छन्।
ठूलो भीड जम्मा हुन नदिन सरकारले सबै धार्मिक चाडहरू पनि स्थगन गर्न अनुरोध गरेको छ। सरकारी कार्यालय, संस्थान तथा बैंकहरू सामान्य रूपमा सञ्चालन हुनेछ। सामाजिक दूरी सुनिश्चित गर्न बस, भ्यान र रेलहरूलाई क्षमताभन्दा आधा यात्री मात्र ओसार्ने आदेश दिइएको थियो र सबै सवारीसाधनलाई किटाणुमुक्त गर्न भनिएका थियो।
अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेससँगको कुराकानीमा श्रीलंकामा यस रोगको संक्रमण न्यून भएको बताउँदै स्वास्थ्य सेवाका महानिर्देशक डा. अनिल जयसिंघेले भने- ‘हामीकहाँ कोरोनाको संक्रमण सामुदायिक तहसम्म कहिल्यै पुगेन।’
श्रीलंकाले आइतबारसम्म २ सय ७१ जना संक्रमित र सातजनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ, जबकि ९६ जना बिरामी उपचारपछि निको भइसकेका छन्। श्रीलंकाका सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शवेन्द्र सिल्वाले १ हजार ५ सय ६३ जना संक्रमित अझै पनि सेनाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन केन्द्रमा रहेको बताएका छन्।
हालसम्म ४ हजार १ सय ४३ जना क्वारेन्टाइन केन्द्रबाट फर्किसकेका छन्। आंशिक रूपमा कर्फ्यु हटाइए पनि सरकारले नागरिकलाई काममा जानेबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन जोड दिएको छ।